တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 30, 2005 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
အချိန်ကြာမြင့်စွာဆော့ဖ်ဝဲလ်လုပ်ငန်းကိုဆော့ဖ်ဝဲလ်လူစုနှင့်အက်ပလီကေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူလူစုခွဲသည်။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်သင်၏ PC / MAC တွင်သင်အလုပ်လုပ်သည်။ ASP သည်ဆာဗာပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သော software ဖြစ်ပြီးသင် browser မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ASP ၏အားသာချက်မှာ၎င်းတို့သည်ဒေသအလိုက်ဘာတစ်ခုမှတပ်ဆင်စရာမလိုဘဲပြင်ဆင်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကိုဖြုတ်ချနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အားနည်းချက်မှာ browser-based software သည် client-side programming နှင့် browser ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်ပြင်းထန်စွာကန့်သတ်ထားသည်။
ကောင်းမွန်သောဥပမာအချို့ - ဤအရာကိုဆွဲချ။ စစ်ဆေးပါ site ကို.
MS Word ကိုကြိုက်လား? ဝဘ်ပေါ်ရှိမယုံနိုင်လောက်အောင်တည်းဖြတ်သူအချို့ရှိသည်။ ဒီမှာတစ်ခုပါ
Application Service Provider များစတင်မ ၀ င်ရောက်မီမကြာမီမှာပဲ။ လိုင်စင်တစ်ခုစီအတွက်ရာဂဏန်းအနည်းငယ်ပေးရမယ့်အစား Microsoft Office ကိုတစ်လဒေါ်လာ ၉.၉၅ နဲ့ငှားရမ်းတဲ့နေ့ကိုငါမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ 16, 2007 မှာ 2: 20 AM
@Douglas- "PHP နှင့် VBScript များသည် Server-side ဘာသာစကားများ၏ ဥပမာများဖြစ်သည်။"
ဒါ တကယ်တော့ မဟုတ်ဘူး။ နည်းပညာပိုင်း VBScript အကြောင်း မှန်ပါတယ်။ ဘယ်အရာက ပိုမှန်လိမ့်မယ်"VBScript သည် Microsoft ၏ Internet Explorer တွင် client-side scripting language အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း၊ Server-side တွင် အများစုအသုံးပြုထားသော scripting language တစ်ခု၏ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။"
ဟုတ်တယ်၊ အဲဒါက ပါးစပ်နဲ့ပြောလို့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့် စကားစပ်မိလို့ အားထုတ်ဖို့ ဘာကြောင့်သွားတာလဲ။ 🙂